Nyanzvi yeZvehutano Yoyambira Kuti Huwandu hweVari Kubatwa neCovid-19 Hunogona Kupota Huchikwira neKudzikira
Mukuru webazi rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Portia Manangazira
Bazi rezvehutano rinoti vanhu gumi nevanomwe. kana kuti 17, vakafa neCovid-19 neMuvhuro, uye vamwe zana nemakumi matanhatu, kana kuti 160, vakawanikwa vaine chirwere ichi neMuvhuro wakare.
Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa munyika yose hwave pachiuru nemazana maviri ane makumi matatu nevana, kana kluti 1 234, kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi nyika yose vasvikawo pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi mana nevasere, kana kuti 33 548.
Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanonzi vanhu vagara vari munyika, uye dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vanosvika makumi manomwe nevaviri, kana kuti 72.
Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 munyika yose vanonzi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nemumwe, kana kuti 5 731.
Pavanhu ava, vari muzvipatara vanonzi nebazi rezvehutano vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 199.
Pane vari muzvipatara ava makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 99, vanonzi vari kunzwa zviri pakati nepakati, makumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 69, vari kurwarisa, kuchitiwo vapfumbamwe, kana kuti 9, vari mu Intensive Care Unit.
Mukuru webazi rinoona nezvezvirwere zvinotapurirwana mubazi rezvehutano, Doctor Portia Manangazira, vanoti kusvika pave nenhomba, huwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCovid-19 hucharamba huchikwira nekudzika zvichienderana nekuti vanhu vari kuzvidzivirira zvakadii.
Dr. Manangazira vanoti chikuru chakanyanya kuita kuti vanhu vakawanda vabatwe pamwe nekufa neCovid-19 inyaya yekuti veruzhinji vakanga vasati vave kiutora chirwere ichi nehudzamu hwacho.
Vanotiwo zvimwe zvakawedzera huwandu kushanya kwakaita vanhu, zvikuru vaibva kune dzimwe nyika vakadzoka kumusha munguva yezororo reKisimusi negoredzva, uye kumbovhurwa kwakaitwa zvikoro kuitiira kuti vana vakwanise kunyora bvunzo.
Panyaya yekuti muzviopatara zvehurumende muri kunzi hamuna mibhedha yakakwana kudivi reIntensive Care Unit, Dr. Manangazira vanotiwo chinogona kunge chiri chokwadi kuti mune dambudziko rakadaro, vachiti Covid-19 payakauya haina kumisa zvimwe zvirwere zvakagara zviripo nechakare zvinoda hunyanzvi hunowanikwa ku ICU.